Ọtụtụ ndị mmadụ na na onwe ezinụlọ ịnwụde n'okpuru ibu ibu nke dị iche iche mkpuchi iwu atụmatụ, na nke a bụ akpịrị na-emetụta ezinụlọ ha ego na ụkpụrụ nke ndụ. Ha n'aka ịghọta mkpa na-akwụ ụgwọ ha premiums stoutly na-eme otú ahụ, ma ha na mmetụta na ha n'ozuzu ego na ezinụlọ ibi ndụ na-agaghị efu na ha - ya mere ha mkpa scout ụzọ zọpụta nnukwu na ha mkpuchi atụmatụ n'emebighị àgwà nke dị atụmatụ. Kere akwụ ụgwọ maka ezinụlọ ahụ ike mkpuchi, n'ụlọ na ihe onwunwe mkpuchi, na akpaaka mkpuchi ụgbọ ala, na ndụ mkpuchi n'etiti ndị ọzọ, ihe a ga-ekpe na-elekọta ezinụlọ na-arụ ọrụ onye na nrọ na ebumnobi? Azịza nke ajụjụ a na-emesi ihe mere ị ga-azọpụta nnukwu na mkpuchi, na-esonụ bụ otú:
i. Welienụ deductibles: Ị maara ihe ọ pụtara ma ọ bụ ịkpọlite ​​dịkwuo gị deductibles, ị chọghị? Nke a pụtara na ị na dịkwuo ego nke si-nke-n'akpa uwe chịkọtara ị na-akwụ na mberede ọnọdụ ndị na-ikike mkpuchi akwụ ụgwọ adọ. Mgbe ị na bulie gị deductibles, ụlọ ọrụ ịnshọransị na-ahụ gị dị ka mbenata mere nke-akwụ ụgwọ na-ekwu na ha ma na ha na-akpaghị aka belata gị premiums ka nnọọ oké ọnụ udu - kwe gị zọpụta nnukwu na atụmatụ na ị pụghị ime na-enweghị na apụghị ịbụwo na o kwere omume na-enweghị akpọlite ​​deductibles.
ii. Gwa gị n'ụlọnga na ego: Gwa mkpuchi gị n'ụlọnga iji nyochaa mkpuchi gị iwu na atụmatụ na-ahụ otú i ruo eru maka ego udu na gị premiums. Ọtụtụ ndị na-eru eru maka mkpuchi ego n'amaghị, na ha na-aga na-aṅa elu udu n'ihi na ha ụlọ ọrụ ịnshọransị ga-abụ onye ikpeazụ na-agwa ha ma ọ bụrụ na ha na-enwe ezi mmekọrịta ha na mmadụ. Gị mmadụ-arụ ọrụ kwesịrị gị ego na-enyere gị aka iji zọpụta nnukwu dabeere na ihe na-amara gị iwu na ego nke iwu atụmatụ ị nwere na ọrụ inshọransị.
Atọ. Welienụ Ebe E Si Nweta akara: Insurance ụlọ ọrụ tụlee gị oké ihe ize ndụ ka amụma mkpuchi mgbe i nwere ọjọọ Ebe E Si Nweta fim. Gịnị nwere ike ị na-amaghị bụ na mkpuchi sịrị ịrụ ndabere ndenye ego gị na-ahụ otú akwụmụgwọ gị scores ma ọ bụ Fim bụ. Ọ bụrụ na gị n'aka ọtụtụ dị nnọọ ala mgbe ị na-iwe tọgbọ a elu adịchaghị ọnụego mgbe ha amụma mkpuchi gị, Ma mgbe ị na-arụ ọrụ siri ike ịrụzi bulie gị Ebe E Si Nweta Fim mgbe ahụ, ha belata gị adịchaghị udu. Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ dị nnọọ elu udu ruru ọjọọ gị Ebe E Si Nweta scores tupu ịrụzi ha, mgbe ị ga-agwa ha nke mgbanwe mere na ha nwere ike eme gị belata adịchaghị udu ozugbo.
iv. Jiri otu ụlọ ọrụ: Nke a na-eme ka nkịtị uche: na-eji otu mkpuchi ike ma ọ bụ ụlọ ọrụ ka amụma mkpuchi niile gị na ezinụlọ gị, property, ahụ ike na ihe ndị ọzọ. Ma ọ bụ kama, amụma mkpuchi gị niile ụgbọala na otu ọrụ inshọransị; mkpuchi niile ezinụlọ ahụ ike na ọgwụ na atụmatụ na otu mkpuchi ike; mkpuchi niile n'ụlọ na ihe onwunwe akụ na otu ọrụ inshọransị, na ị ga-enwe ike iji zọpụta nnukwu na ndị a niile mkpuchi atumatu.
v. Ịnọ ná Ntụkwasị Obi n'ụlọ gị gị na na ụgbọala: Wụnye nche atụmatụ na Ngwa n'ebe obibi unu na ụgbọala na-egbochi ọ bụla incidences nke ohi ahụ e zuru, vandalizim na thefts. Nche Ngwa dị ka ọkụ emenyụ ọkụ, ohi ahụ e zuru Mkpu, mgbochi mkpọchi ụlọ ọrụ na ndị ọzọ na nche atụmatụ ga-ebelata ma ọ bụ ịkwụsịlata ihe ndi mere nke ihe mberede n'ebe obibi unu na ụgbọala, na nke a ga-ukwuu ịzọpụta gị ego ebe gị insurer ga na-akpaghị aka belata gị adịchaghị udu.
Tags:5 Chọpụta Ụzọ Ịzọpụta Big On gị Insurance, Save Big On Your Insurance